Apple mgbe niile nwere ntinye Mac maka ndị ọrụ na-amali elu | Esi m mac
Dị ka onye ọrụ Mac, site n'oge ruo n'oge onye m maara na-ajụ m banyere ahụmịhe m na Mac, ebe ha na-eche echiche banyere ịgbanwe ngwa ọrụ ma chọọ ịma etu akụrụngwa a si arụ ọrụ. N'otu aka ha na-ekwu na ha na-arụ ọrụ ebube, mana n'aka nke ọzọ ha na-eweta ego ahụ. Ọ gwụla ma ị bụ onye ọrụ aka ọrụ, Mgbe niile m na-adụ ha ọdụ ka ha zụta Mac ma ọ bụ etiti Mac, nke mere na ya onwe ya ji ahụmahụ ya kpọrọ ihe. Mgbe ule ahụ gasịrị, onye ọrụ ahụ nwere afọ ojuju zuru oke ma mechaa meziwanye ma ọ bụ zụta ngwaahịa ndị ọzọ. Apple makwaara na nke a bụ ọnụ ụzọ ámá maka ọtụtụ ndị ọrụ ma na-echekwa ebe ụfọdụ Macs.
Anyị nwere ike ịsị na ihe mgbochi ntinye bụ € 1000, ọ bụrụ na anyị chọrọ Mac ọhụrụ. Ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị oke ego maka onye ọrụ nke ojiji ya bụ ịchọgharị, ozi, ide na dezie akwụkwọ. Ma n'aka nke ọzọ, anyị nwere otu ndị kachasị mma site na ụdị kachasị dị mkpa. Ma anyị anaghị ekwu maka mmiri ma ọ bụ imewe, nke nwere ike bụrụ ihe ọzọ. Anyị na-ekwu okwu banyere ọla dị na okpueze, dịka ọ bụ MacOS. Ma ọ bụ na ihe ndị kasị isi Mac nwere otu n'ime ihe ndị kasị mepụtara na ala sistemụ na ụwa. N'ezie, mgbe onye ọrụ ọhụụ gafere oge mmegharị ya, ọ ga-esiri ya ike ịlaghachi na ngwá ọrụ ochie, ọ bụrụ na anyị na-ezo aka na ngwanrọ.
Mana anyị na-ekwu maka ngwaahịa a. Anyị nwere nhọrọ atọ: Jiri elele desktọọpụ desktọọpụ gara aga wee họrọ Mac Mini. Nweta kọmputa desktọọpụ dị mkpa nke Apple, iMac ma ọ bụ họrọ nhọrọ a na-ebugharị, yana MacBook Air dị ogologo.
El Mac Obere, ọ nwere ọnụahịa ntinye dị ọnụ ala karịa. Site na € 549 anyị nwere ike ịghọ akụkụ nke klọb Mac. Anyị nwere obere ndị otu, mana nke na-ebunye 5 GHz dual-core Intel Core i1,4 processor, 4 GB nke RAM na 500 Gb nke diski ike.
Ke akpatre Apple keynote, anyị natara obi ụtọ na anya, n'ihi na iMac Malite na € 1.299. O nwere ike iyi ka ọ dị ọtụtụ, mana anyị nwere 5 GHz dual-core Intel Core i2,3 processor, nwee ike iru 3,6 GHz, 8 GB nke RAM na 1 TB nke ebe nchekwa dị n'ime. N'ezie anyị nwere ihe niile ịchọrọ iji gbanye ma gaa: ngosipụta dị elu nke retina, Ime Anwansi na Ime anwansi.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na laptọọpụ bụ ihe gị, ị nwere na i nwere otu nke kọmputa ọtụtụ Agbaghara site Mac ọrụ, ndị MacBook Ikuku. Ọ bụ otu ndị na-eguzogide ngafe nke afọ na a nnyocha e mere site na m si Mac, izu ole na ole gara aga, ndị ọrụ achọghị ka ọ laa. Maka nke a ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, Apple nwere ya na katalọgụ ya. Ọ dị mma maka ịrụ ọrụ na njem ahụ, n'ihi nha na ịdị arọ ya. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ma n'ezie maka onye na-amalite. Maka € 1.099 ị nwere obere mkpuru a, nke na-ebunye 5 GHz dual-core Intel Core i1,8 processor, 8 Gb nke RAM na 128 Gb nke ebe nchekwa dị n'ime SSD.
Site na ozi a niile, enyi gị ma ọ bụ onye ọlụlụ agaghị enwe ihe ngọpụ iji gbanwee gaa Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple mgbe niile nwere ọnụ ụzọ ámá Mac maka ndị ọrụ na-eme mkpọtụ ahụ
Chọpụta, Ọrụ hapụrụ anyị atọ nnukwu ụdị, iMac, MacBook Pro, MacBook Air 
Zaghachi Gema Lopez